Toarega (vahoaka) - Wikipedia
Lehilahy toarega ao Maly
Faritra misy ny Toarega ao Afrika
Ny Toarega, dia vahoaka ao Sahara afovoany sy any amorony (Alzeria, Libia, Nizera, Malỳ, Maoritania, Tsady ary Borkina Fasô). Miantso ny tenany amin'ny fiteny berbera hoe ⴾⵍ ⵜⵎⵛⵈ / Kel Tamsheq ny Toarega. Mampiasa fiteny berbera izy ireo, dia ny fiteny tamaseka izay soratana amin'ny abidy atao hoe tifinàga (tifinagh).
Toarega nandritra ny festivalin' ny Tany Efitra tany Maly tamin' ny taona 2012.
Ny Toarega dia monina amin' ny faritra midadasika izay mivelatra hatrany Magreba any avaratra ka hatrany Afrika atsimon' i Sahara. Miparitaka ao amin' ny firenena maro ao Afrika ny Toarega, ka ny ahitana azy ireo maro dia any Alzeria, Borkina Fasô, Libia, Maly, Maoritania, Nizera, Nizeria ary Tsady.
Matetika dia olona mpifindrafindra fonenana ny ny Toarega, ka ny fiorenam-ponenany dia nihafaingana hatramin' ny antsasany faharoa amin' ny taonjato faha-20. Matetika dia iharan' ny fampiraisam-bolo ara-kolontsaina sy ara-piteny ary iharan' ny fanavakavahana ara-toekarena sy ara-pôlitika izy ireo ka izany dia niteraka ady mitam-piadiana tamin' ireo taona 1990. Maro ny Toarega nandao ny fiainana tsy miorim-ponenana ka nanorim-ponenana ao amin' ireo tanàn-dehibe manamorona an' i Sahara, toa an' i Tamanrasset any Alzeria, i Agadez ao Nizera, ny renivohitr' ireo fanjakana saheliana toa an' i Bamako sy i Niamey.
Ny Toarega dia miteny amin' ny fiteny toarega maro, izay ao amin' ny sampana berberan' ny fianakaviam-piteny afrô-aziatika na hamitô-semitika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toarega_(vahoaka)&oldid=1012978"
Voaova farany tamin'ny 23 Jolay 2021 amin'ny 13:02 ity pejy ity.